Ahoana ny famerenana miala amin'ny Windows Password ao amin'ny kaonty administrateur?
Ny fisintonana avy amin'ny kaonty administrateur domelina amin'ny Windows Server dia tsy fahatsapana mahafinaritra. Ireo tenimiafina ireo dia mahasamihafa tokoa satria izy ireo dia manome ny haavon'ny fidirana, ary ny tolo-kevitra dia ny manova matetika ny tenimiafina mba hanakanana ny fidirana tsy nahazoan-dalana. Ahoana ny fomba ...
Ahoana ny fametrahana an'i Piwik amin'ny Nginx amin'ny Ubuntu 15.10
Ahoana ny fametrahana Piwik amin'ny Nginx amin'ny Ubuntu 15.10 Piwik no fampiharana mivantana loharanom-baovao amin'ny tranonkala, dia novolavolaina mba hanome vahaolana amin'ny google-analytics. Piwik dia manome anao ny fanaraha-maso tanteraka ny angona misy anao amin'ny fampiasana ny fiarovana manokana momba ny tsiambaratelon'ny mpampiasa ary manome fahazoan-dalana tsara ...
Mampiasa IPv6 amin'ny Linux? Azo inoana fa nitsidika an'i Shodan sy scanner hafa ianao
EnlargeOne amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny protocola amin'ny Internet izay fantatra amin'ny anarana hoe IPv6 dia ny fiarovana manokana izay omena azy amin'ny alàlan'ny predecessor IPv4. Miaraka amin'ny 2128 (na momba ny 3.4 × 1038) mahavariana azonao atao, ny adiresy IP dia tsy voafetra amin'ny karazam-pandrenesana mihatra amin'ny mpanao heloka bevava.
Manamarina ireo rindran-damina manondro ny tranokalanao ianao, tahaka ny ataonao indraindray, rehefa hitanao izany: goavana goavana amin'ny rohy. Amin'ny voalohany, tsy azonao antoka raha ho tezitra na matahotra ianao, fa rehefa mijery akaiky dia matahotra ny fahatahorana anao-ianao dia voakiana. Misy olona mandoro ny tranokalanao ...
Vakio ny lahatsoratra ao ambadik'ireo rindrankajim-bola amin'ny alalan'ny masquerading amin'ny Googlebot
Ny aterineto dia manjavozavo. Ny fitomboan'ny adblocking tsy mitsaha-mitombo dia namarana ny modely fampindramana izay mifototra amin'ny dolara dolara fotsiny ihany mba hampiasana tranokala sy orinasa. Indrindra fa ny tranokalam-baovao dia nanomboka nanandrana ny fomba hanapariahana loharanom-bola, ary ny iray ...
Ahoana ny fametrahana LEMP amin'ny Ubuntu 14.04
Fantatsika rehetra ny LAMP, sa tsy izany? Midika hoe Linux, Apache, MySQL ary PHP. Io no tranokala nentim-paharazana izay nanorenan'ny ankamaroan'ny mpandrindra ny fampiharana azy ireo nandritra ny folo taona lasa. Na izany aza, amin'ity lesona ity dia hosolointsika ny lohamilina MySQL nentim-paharazana miaraka amin'ny solon'anarana antsoina hoe MariaDB, ...
Ahoana no hametrahana WordPress amin'ny Apache, MariaDB ary PHP 7 amin'ny Arch Linux
Ahoana no hametrahana WordPress amin'ny Apache, MariaDB sy PHP 7 amin'ny Arch Arch Linux WordPress dia populaire, dynamique, blog-focused content management system. Ny rindrambaiko dia naorina eo amin'ny lampihazo LAMP na LEMP ary manasongadina rafitra sy rafi-pandam-pirafitry ny plugin, izay mamela ny tompona tranokala sy ...
Ampidiro ny Postfix mba hampiasa Gmail ho mailaka mailaka
Ampidiro ny Postfix mba hampiasa Gmail ho mailaka mailaka Raha manana kaonty Gmail ianao, dia azonao atao ny mametraka ny MTA anao hamerina mailaka mailaka amin'ny Gmail. Izany dia manome tombony ny fahamendrehan'ny Gmail sy ny foto-drafitr'asa matanjaka, ary manome anao ny fomba tsotra handefa ...
Ahoana ny fametrahana Proxmox VE 4 amin'ny Debian 8 (Jessie)
Ahoana ny fametrahana Proxmox VE 4 amin'ny Debian 8 (Jessie) Proxmox Virtual Environment na Proxmox VE ho an'ny viriosy Open Source dia azo ampiasaina amin'ny Debian Linux miaraka amin'ny kernel RHEL, miova mba ahafahanao mamorona sy mametraka milina virtoaly ho an'ny serivisy tsy miankina.
Ahoana no hividianana taratasy SSL amin'ny RoseHosting.com
SSL (Secure Sockets Layer) dia protocopie kriptografika noforonin'i Netscape mba hanomezana fiarovana amin'ny serasera amin'ny Internet. Ity protocole ity dia mamorona fifandraisana voafaritra eo amin'ny tranonkala iray web ary ny tranonkala mpampiasa ny endriny izay mamela ny fampahalalana tsy miankina azo alefa tsy misy fehezam-boninkazo, voadaka na ...
Ahoana no hametrahana ProjectSend amin'ny CentOS 6
Androany dia hampiseho aminao ny fomba hametrahana ny ProjectSend amin'ny Centos 6 VPS amin'ny alalan'ny tranonkala Apache sy ny tranokala MySQL. ProjectSend dia rakitra loharanom-baovao misokatra sy fampiharana sary izay ahafahanao mampakatra rakitra ary manendry azy ireo ho an'ny mpanjifa manokana noforoninao! ProjectSend ...
Linux sy Unix SysAdmins ny famolavolana ny taona vaovao (2016)
Androany no andro farany amin'ny 2015 ary izany indray no fotoana ijoroany. Ity ny tenako manokana an'ny 12 ho an'ny Taombaovao. 1. Hamarino ny Fahamarinana Faharesen-dahatra (2FA) Tsy ampy ny fametrahana ny tenimiafina efa ela sy sarobidy ho an'ny root / admin, ny backup, devotos, na ny kaonty. ...
Ireto ny tenimiafina tiako indrindra amin'ny 10
Jane McCallion News 1 Mar, ny tambajotran'i Heisenberg 2016 dia manambara ny fahazoan-dàlana voapetraky ny olon-dratsy amin'ny ankapobeny Ny tenimiafina malaza indrindra ampiasain'ny Hackers hampiasaina rehefa manandrana mandika ny IT dia napetraka tamin'ny Rapid 7. 'X' dia manaparitaka ny lisitry ny ...
Fomba fijerena 5 mba hahazoana ny SEO Traffic amin'ny lozam-piaramanidina mafy
Io no iray amin'ireo fanamby goavana indrindra amin'ny SEO. Azonao atao ny mamaky momba ny tetikady SEO isan-karazany ao amin'ny bilaogy samihafa, fa hiasa ho anao ve izy ireo? Raha ny marina, izany no lafiny manan-danja. Tsy ny olon-drehetra no manontany tena momba izany satria fantany fa SEO mahazatra ...
Mametraka Sentora amin'ny CentOS 7
Amin'ity lesona ity dia hanafenanay ny dingana ilaina amin'ny fametrahana Sentora amin'ny CentOS 7 VPS. Sentora dia tranonkala fanaraha-maso fampiantranoana izay afaka maimaim-poana. Izy io dia natsangana ho an'ny Linux, UNIX ary BSD na orinasa mpanodina BSD. Amin'ny fampiasana software Sentora dia afaka ...
Upgrade Mozilla Firefox 45 Amin'ny Ubuntu Systems
Navoaka ny Mozilla Firefox 45. Afaho ary ampio Firefox 45 amin'ny Ubuntu Systems. Ahoana ny fametrahana Mozilla Firefox 45 amin'ny Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 ary Ubuntu 14.10 Systems. Ny Mozilla Firefox 45 dia navoaka miaraka amin'ireo karazana vaovao sy famaha. Ny sasany amin'ireo olo-malaza indrindra ...
Ahoana no fomba hananganana serivera mailaka amin'ny Mailinabox amin'ny Ubuntu 14.04
Ny Mailinabox dia rindrambaiko maimaim-poana sy malalaka izay mametraka vahaolana feno amin'ny alàlan'ny stack miaraka amin'ny tambajotra fanaraha-maso tsara ao anaty minitra vitsy monja. Ny fampiasana ny serivisy mailaka mora mailaka dia mora mora amin'ny Mailinabox amin'izao fotoana izao. Izy io dia natao hamahana ny SMTP, ...
Aoka ianao ho sahy: 4 Tsy mahazatra ny votoatim-pikambana izay manintona an-jatony amin'ny backlinks
Raha mila teboka goavana amin'ny tontolo SEO amin'izao fotoana izao ianao, mila zavatra tena ilaina. Tsotra izany. Ireo rohy ireo dia manatsara ny fikarohana karazam-pikarohana ary mandefa anao ny fitaterana fifamoivoizana. Amin'ny ankapobeny, ny lahatsoratra rehetra novakianao tamin'ny mombamomba ny votoaty dia tonga hatramin'ny roa ...
Ahoana ny fametrahana Zabbix 3 amin'ny Debian 8 sy Ubuntu 16
Zabbix dia orinasam-pampandrosoana mivantana fanaraha-maso izay manara-maso izay azo ampiasaina hanaraha-maso sy hanaraka ny fahombiazan'ny tambajotra, fitaovana ary ny loharanon'ny IT. Izy io dia manohana ny fanaraha-maso ary ny fanaraha-maso WEB, ny fitadiavam-batana, ary ny hafa. Nandramako ity fomba fanao amin'ny Ubuntu 16.10, na izany aza ...
Ahoana no hametrahana Framework Symfony 3 miaraka amin'i Nginx amin'ny Ubuntu 14.04
Symfony 3 dia loharano mivelatra ary ny PHP rafitra avo lenta ampiasaina amin'ny fampivelarana ny rindrambaiko 2.0. Symfony dia mamela anao hampivoatra rindrambaiko haingana kokoa sy tsaratsara kokoa noho ny PHP. Anatin'ity dingana manaraka ity, hampiseho aminao ny fomba hametrahana symfony 3 mora foana ...
1 2 3 4 ... 8 Manaraka
Company Users Google rindrambaiko Rafitra fikirakirana PHP loharano misokatra Ubuntu 14.04 Debian Time Performance Support Plugins WordPress Screen "PC HTML Linux Mint Firefox web server Plugin Ubuntu 16 ram Chrome vaovao farany web browser PPA fifamoivoizana raki-daza Ubuntu 14.10 OS X Unité centrale app store Samsung lalao bilaogy Command Apps rafitra finday avo lenta hametraka SSD tahirin-kevitra fanamarinana Windows Phone MySQL command line fitaovana Cortana Server Apache Linux paoma Microsoft Windows Up " fitaovana finday PDG 'App Twitter Facebook 10 Windows endri-javatra Windows 8 SSH IP adiresy HTTP CentOS HTTPS haino aman-jery sosialy Database Ubuntu YouTube API fitaovana GNOME bilaogy Android SEO taona Microsoft toe-tsaina nbsp Fitaovana finday One ' fikarohana File Malagasy Bible fitaovana Samsung Galaxy Toetoetra CentOS 7 windows update Linux Ubuntu Systems Video ubuntu 15.04 USB Nginx famerenana Bing 04 MAMAKA afa-po Phone famotsorana takelaka fikirakirana Apple Watch Windows 10 iPhone lalao Unix